सिरिया संकट इडलिबमा सरकारी सेनाको निरन्तर हमला - Naya Patrika
सिरिया संकट इडलिबमा सरकारी सेनाको निरन्तर हमला
दमास्कस | भदौ २६, २०७५
सिरियाको सरकारी सेनाले इडलिब सहरमा विद्रोहीलाई लक्षित गरेर सुरु गरेको हवाई हमलाका कारण ३० हजारभन्दा बढी जनता विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । रुसी तथा सिरियाली सैनिकले यस क्षेत्रमा पछिल्लो एक सातादेखि बम हमला गरिरहेका छन् ।
यसअघि शुक्रबार सिरियाका सहयोगी राष्ट्र रुस तथा इरानसँग टर्कीले युद्धविराम गर्नका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तीन राष्ट्रबीचको लामो छलफलका क्रममा टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप इर्डोगानले गरेको आग्रह रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इरानका राष्ट्रपति हसन रोउहानीले अस्वीकार गरेका थिए । पुटिन र असदले सिरियामा आतंककारीलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
त्यसयता शनिबारबाट सिरियाको सरकारी सेनाले रुसको सहयोगमा फेरि हवाई हमला सुरु ग-यो, जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ । यस हमलाका क्रममा विनाशकारी ग्यासयुक्त विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । विध्वंशकारी हमलामा परेर आइतबार कम्तीमा दुई बालबालिकासहित केही स्थानीयको मृत्यु भएको उद्धारकर्मीहरूले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवीय सहायता मामिला प्रमुख मार्क लोककले २१औँ शताब्दीकै विनाशकारी मानवीय क्षति निम्त्याउने घटनाका रूपमा यो घटना विकसित हुन सक्ने खतरा औँल्याएका छन् । ‘इडलिबमा एक्काइसौँ शताब्दीकै भयानक दुर्घटनालाई जोगाउने हो भने धेरै समय नलिई यसको समाधानको प्रयास थाल्नु जरुरी रहेको छ,’ लोककले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँग भने ।
कहाँ–कहाँ भयो हवाई आक्रमण ?
इडलिबको दक्षिणी क्षेत्रमा एडलिभ र अल हाबिटमा निरन्तर रूपमा सेनाले आक्रमण गरिरहेको बेलायती संस्था मानवअधिकारका लागि सिरियाली पर्यवेक्षणले जनाएको छ । आइतबार टर्कीको सीमा क्षेत्रनजिक ठूलो आक्रमण भएको सो संस्थाले जनाएको छ ।
‘सरकारी हेलिकोप्टरले अल हबिट गाउँमा ६० भन्दा बढी बारेल बम खसालिरहेका छन्,’ पर्यवेक्षण समूहका प्रमुख रामी अब्देल रहमानले भनेका छन् । घटनामा कम्तीमा दुई बालबालिकाको मृत्यु तथा ६ भन्दा बढी घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको उक्त संस्थाले जनाएको छ ।
सिरियाली सेनाले बारेल बम प्रयोग नगरेको दाबी गरेको छ । इडलिबबाट उत्तरतर्फ रहेका सालकिन र दाना क्षेत्रमा पनि हमला भएको छ । तर, त्यहाँ अहिलेसम्म कुनै मानवीय क्षति भएको छैन ।
रुसी जेटले उत्तरी हामास्थित लाटाम्नेह र कर्फ जेइटा क्षेत्रमा आक्रमण गरेको हुन सक्ने पर्यवेक्षण समूहले जनाएको छ । यस घटनामा लाटाम्नेह गाउँका पाँचजना घाइते भएको जनाइएको छ । हमलाका कारण अस्पतालमा क्षति पुगेको छ । यसअघि शनिबार पनि इडलिबको दक्षिणी सहर हासमा रहेको स्वास्थ्य चौकी हवाई हमलाकै कारण क्षतिग्रस्त भएको थियो ।
‘स्वास्थ्य सेवामाथिको बढ्दो आक्रमण निन्दनीय छ । सिरियाको यो भीडभाडपूर्ण क्षेत्रमा दशौँ लाख जनता खतराको जीवन बाँचिरहेका छन्,’ अमेरिकास्थित युनियन अफ मेडिकल केयर एन्ड रिलिफ अर्गनाइजेसन्सका प्रमुख गानेम तायाराले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।
रुस तथा इरानको सहयोगप्राप्त सिरिया सरकारले इडलिब तथा विद्रोहीको कब्जामा रहेका उत्तरपश्चिमा क्षेत्रका गाउँहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा फर्काउन खोजेको छ । यो क्षेत्र विद्रोही पक्षको बलियो प्रभाव रहेको एक मात्रै क्षेत्र हो । हवाई हमलापछि आतंकित भएका हजारौँ स्थानीय सहयोगको आशामा सडकमा ओर्लिएका थिए । दर्जनौँ कार तथा ट्रकले उनीहरूलाई उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा लगे ।
टर्कीसहितका देशले रुसले टर्किस सीमा क्षेत्रनजिकैको यस क्षेत्रमा यसरी नै निरन्तर हमला गरिरहे रक्तपातपूर्ण अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो क्रूरतापूर्ण अवस्थाले दशौँ हजार सर्वसाधारणलाई खतरामा पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
कसको कब्जामा छ इडलिब ?
इडलिबको आधाभन्दा बढी क्षेत्रफल हायात ताहासिरर अल साम (एचटिएस)को कब्जामा छ । यो समूह अलकायदाको सहयोगी समूह हो । बाँकी क्षेत्रमा विपक्षी पार्टीको पकड छ । सरकारी सेनाले दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा मात्रै आफ्नो नियन्त्रण राख्न सकेको छ ।
एचटिएस र अन्य केही विद्रोही समूहहरू छिमेकी प्रान्त एलेप्पो, हामा र लाटाकियाका केही भूभागमा पनि क्रियाशील छन् । रुसले आफ्नो आक्रमण अलकायदाप्रेरित समूहप्रति मात्रै लक्षित रहेको र सर्वसाधारणलाई असर गर्ने गरी निसाना नबनाएको दाबी गरेको छ ।
यद्यपि, विपक्षी पार्टी तथा स्थानीयहरूले पछिल्ला दिनमा मारिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण नै रहेको जनाएका छन् । इडलिबमा सरकारी सेनाले पछिल्लो एक महिनादेखि नै गस्ती सुरु गरेको थियो । यसै वर्षको सुरुवातमा सरकारी सेनाले विद्रोहीको कब्जामा रहेका देशका अधिकांश भूभाग फिर्ता गरेका थिए । सन् २०११ मा सिरियाली गृहयुद्ध सुरु भएयता ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ भने दशौँ लाखले देश छाडेका छन् ।